Fanamboarana tsara indrindra an'ny prepreg- Carbon fibre mpanamboatra sy Pabrika | Wanhoo
Carbon prepreg dia misy fibre lava maharitra sy resina tsy voadio. Izy io no endrika akora mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny fanaovana fitambarana avo lenta. Ny lamba prepreg dia misy andiana fonosana fibre izay misy resina tsy voatanisa. Ny fonosana fibre dia atambatra ho ao anaty atiny sy ny sakan'ny takiana, ary avy eo dia sarahina mitovy amin'ny fefy fibre ny fibre. Mandritra izany fotoana izany, ny resina dia hafanaina sy mifono amin'ny taratasy famotsorana ambony sy ambany. Ny fibre sy ny taratasy famotsorana ambony sy ambany nopetahany resin dia nampidirina tao anaty roller niaraka tamin'izay. Eo anelanelan'ny taratasy famotsorana ambony sy ambany ny fibre, ary ny resina dia zaraina mitovy eo anelanelan'ny fibre amin'ny alàlan'ny tsindry ny roller. Aorian'ny fampangatsiahana na fanamainana ilay fibre nohomboana resina dia ahodina ho coiler ilay izy. Ny fibre nohomboana resina voahodidin'ny taratasy famoahana ambony sy ambany dia antsoina hoe prepreg fibre carbon. Ny prepreg mihodina dia mila gelatinized amin'ny dingana ny ampahany fanehoan-kevitra eo ambanin'ny mari-pana voafehy sy ny hamandoana tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao, ny résin dia mafy, izay antsoina hoe B-stage.
Amin'ny ankapobeny, rehefa manamboatra lamba prepreg fibre karbona dia mandray karazany roa ny resin. Ny iray dia ny fanafanana mivantana ny resina hampihenana ny viscosity ary hanamorana ny fanaparitahana fanamiana eo amin'ireo fibre, izay antsoina hoe fomba adhesive melt mafana. Ny iray hafa kosa dia ny mandrendrika ny resina ao anaty flux mba hampihenana ny viscosity, ary avy eo afanaina aorian'ny famoahana ny resina amin'ny fibre mba hampandeha ny flx, izay antsoina hoe fomba flux. Amin'ny dingan'ny fomba fametahana mafana miempo, mora ny mifehy ny votoatin'ny resina, azo esorina ny dingana fanamainana, ary tsy misy flux residual, fa avo ny viscosity viscosity, izay mora miteraka fibebahana fibres rehefa mampirehitra kofehy fibre. Ny fomba solvent dia ambany ny vidin'ny fampiasam-bola sy ny fizotrany tsotra, fa ny fampiasana flux dia mora mijanona ao amin'ny prepreg, izay misy fiantraikany amin'ny tanjaky ny fitambarana farany ary miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana.
Ny karazana lamba prepreg fibre carbon dia misy lamba prepreg fibre carbon unidirectional ary lamba prepreg fibre carbon. Ny lamba vita amin'ny takelaka karbaona unidirectional dia manana tanjaka lehibe indrindra amin'ny làlan'ny fibre ary matetika ampiasaina amin'ny takelaka misy laminated mitambatra amin'ny lalana samy hafa, raha ny lamba prepreg fibre carbon dia manana fomba fanenomana samy hafa, ary ny heriny dia mitovy amin'ny lafiny roa, ka afaka ampiharina amin'ny rafitra samihafa.
afaka manome prepreg fibre carbon isika arakaraka ny zavatra takinao
Ny resina vita amin'ny fibre karbonina dia eo am-panaovana réaction parlique, ary hitohy ny fihetsika sy ny fanasitranana amin'ny hafanan'ny efitrano. Matetika izy io dia mila tehirizina anaty tontolo iva ambany. Ny fotoana ahafahana mitahiry prepreg fibre karbonika amin'ny hafanan'ny efitrano dia antsoina hoe cycle cycle. Amin'ny ankapobeny, raha tsy misy fitaovana fitahirizana maripana ambany dia tsy maintsy fehezina ao anatin'ny tsingerin'ny fitehirizana ny habetsaky ny famokarana ary azo ampiasaina.
Teo aloha: Tabilao fibre karbaona mahatohitra hafanana avo
Manaraka: Carbon fibre Fabric-Carbon fibre composites